» ब्याटल राउण्डका लागि छानिएका प्रतिभाहरु भाग २ (भिडियो)
ब्याटल राउण्डका लागि छानिएका प्रतिभाहरु भाग २ (भिडियो)
२२ भाद्र २०७६, आईतवार २१:५९
चन्द्र घलान, मकवानपुर, २२ भदौ । चर्चित गायन प्रतियोगिता ‘भ्वाईस अफ नेपाल’ को सिजन २ मा अहिले ब्लाईन्ड अडिसन राउण्ड चलिरहेको छ । यस अघिको भिडियो सामाग्रीको पहिलो भागमा अहिलेसम्म ब्याटल राउण्डका लागि छानिएकाहरुमध्ये ५ जना प्रतियोगीहरुका बारेमा चर्चा गरिसकिएको छ । यदि तपाईले उक्त भिडियो हेर्नुभएको छैन भने यस भिडियोको डिस्क्रीप्सनमा लिंक राखिएको छ । भिडियोको यो दोस्रो भागमा ब्याटल राउण्डका लागि छानिएका थप ५ जना प्रतियोगीहरुका बारेमा चर्चा गर्दैछौँ । हेरौँ भिडियो–
८) याङ्की योल्मो, दार्जिलिङ– दार्जिलिङको आलुबारीबाट भ्वाईस अफ नेपालको दोस्रो सिजनमा सहभागी हुन आएकी याङ्कीको वास्तविक नाम याङ डोल्मो हो । हेलम्बुको सँस्कृतिसँग जोडिएकी याङ्की आफ्नो हजुरबुवालाई प्रेरणाको श्रोत मान्छिन् । ह्योल्मो सँस्कृतिको गीत समेत गाएकी उनले ब्लाईन्ड अडिसनमा द एज ब्याण्डको ‘मेरो आँशु’ बोलको गीत गाएकी थिईन् । २२ वर्षीया याङ्कीको गीत सुनेर चारै जना कोच फर्किएका थिए । दोस्रो सिजनमा उनी चारै जना कोचलाई आफुतिर फर्काउन सफल तेस्रो प्रतियोगी हुन् । उनी कोच आश्थाको टिममा छिन् ।
९) धर्मबज्र लामा, स्वयम्भु– चाईनिजका साथै विभिन्न भाषाका गीत समेत गाएका धर्मबज्र सानैदेखि संगीतमा रुचि राखेको बताउँछन् । कलेज अध्ययनरत रहँदा ब्याण्डमा समेत जोडिएका उनी कुनै समय सँगीत क्षेत्रमा करियर छैन भन्दै त्यसलाई छोड्ने मनस्थितिमा समेत पुगेका थिए । तर उनलाई सँगीतले सधैँ तानिरह्यो । ३७ वर्षीय धर्मबज्रले ब्लाईन्ड अडिसनमा नविन के भट्टराईको ‘साँझ पख’ बोलको गीत गाएका थिए । उनको आवाजमा कोच दिप श्रेष्ठ उनीतर्फ फर्किएका थिए ।
१०) मेचु धिमाल, मोरङ– गीतहरु लेख्नुका साथै आफ्नै भाषामा पनि गीत गाएकी मेचु आफुलाई अहिले पनि संघर्षरत गायिका बताउँछिन् । आफ्नै भोगाईबाट जीवन बुझेकी २४ वर्षीया मेचुले ब्लाईन्ड अडिसनमा रजिना रिमालको ‘पानीको फोकाजस्तै’ बोलको गीत गाएकी थिईन् । उनले कोच आस्था बाहेक ३ जना कोचहरुलाई आफुतिर फर्काउन सफल भएकी थिईन् । उनी कोच प्रमोदको टिममा छिन् ।
आदरणीय दर्शकबिन्द, तपाईलाई यी ५ प्रतियोगीहरुमध्ये कसको आवाज सबैभन्दा राम्रो लाग्छ ? तपाईको विचारमा कुन प्रतियोगीहरु फाईनलसम्म पुग्न सक्छन् जस्तो लाग्छ ? कृपया कमेन्ट गर्न नभुल्नुहोला । साथै यो भिडियोको पहिलो र तेस्रो भागका साथै भ्वाईस अफ नेपाल सम्बन्धी अन्य जानकारीहरुका लागि हाम्रो च्यानलका अन्य भिडियोहरु पनि हेर्न नभुल्नुहोला ।